चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अबस्था गम्भीर रहेको खबर बाहिरियो, के हो यथार्थ ? — Sanchar Kendra
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अबस्था गम्भीर रहेको खबर बाहिरियो, के हो यथार्थ ?
एजेन्सी। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछिल्ला ६ सय दिनमा देशबाहिर गएका छैनन् । उनको पछिल्लो विदेश भ्रमण म्यानमारमा जनवरी १८, २०२०मा भएको थियो । त्यसयता सीले विदेशी नेतारूसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् भने देशभित्र उनी विभिन्न प्रान्तको भ्रमण गरिरहेका छन् । द सिंगापुर पोस्टले विभिन्न समाचार सूत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा राष्ट्रपति सीको गम्भीर स्वास्थ्यका कारण उनी चीनभित्रै केन्द्रित छन् । अर्थ उनी बिरामी छन ।